रक्सीको सम्बन्ध मानसिक रोगसँग पनि: रक्सी कसरी छुटाउने त ? | Nagarik Khabar - नेपाली जनताको खबर​
विश्वसम्पदा क्षेत्रमा ६ सय संरचना कमपदण्डविपरीत
मिश्र फटाहा, बाँस्कोटा निर्दोष
प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको अढाई महिनामा पनि खेलाडीले पाएनन् पुरस्कार
कोरोना रोक्न खटिए स्वास्थ्यका जनशक्ति
रक्सीको सम्बन्ध मानसिक रोगसँग पनि: रक्सी कसरी छुटाउने त ?
access_time२०७६ साल कार्तिक २ गते, शनिबार ०३:३७ PM chat_bubble_outline Comments folder_open स्वास्थ्य​ मुख्य खबर​
डा. प्रदीप पाण्डे
नेपाली समाजमा धेरै कुराहरुको कुलत छ जस्तै रक्सि, चुरोट, गाँजा, ट्याब, इन्जेक्सन लगायतका कुरा कुलत (Addiction) हुन् । यस्तो कुलतलाई समयमा उपचार गरेमा सजिलैसँग निको हुन्छ भन्ने कुराको ज्ञान कमै व्यक्तिमा छ । त्यसैले आज मैले रक्सीका बारेमा जानकारी दिने प्रयास गरेको छु ।
हाम्रो समाजमा रक्सीलाई विभिन्न नामले चिन्ने गरिन्छ । रक्सी, वियर, ह्वीस्की, छ्यांग, तुम्बा, जाँडलगायतका भिन्न भिन्न प्रकारका फरक फरक रक्सीजन्य पदार्थलाई सम्बोधन गरिन्छ ।
नेपाली समाजमा रक्सीलाई परम्परा र संस्कृतिसँग पनि जोडेर हेर्ने गरिन्छ । विभिन्न जातजातिका लागि यो सर्वस्वीकार्य पेय पदार्थ पनि हो । यसलाई केही जातिले आफ्नो संस्कार र संस्कृतिसँग जोडेकाले यो पेय पदार्थ जताततै पाउनु स्वभाविक पनि हो ।
कतिपय अवस्थामा भने रक्सीजन्य पदार्थको सेवनले हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुर्याउने कुरामा हामीले ध्यान दिएका हुँदैनौँ । यसको प्रयोगमा पनि हामीले निश्चित मापदण्ड तयार गरेका छैनौँ ।
के रक्सी सेवन समस्या हो ?
रक्सी आफैँमा समस्या होइन् । तर कहिले काँही र थोरै मात्रामा पिउने गरेमा लामो समयसम्म पनि यसले नकरात्मक असर नगर्न सक्छ । सकभर त हामीले रक्सी सेवन नगर्नु नै उत्तम हुन्छ ।
रक्सी सेवन गर्ने बानीका कारण कहिले समस्या हुन्छ ?
हरेक दिन रक्सी खानु पर्ने अवस्थामा पुगेमा भने यसले समस्या दिएको बुझ्नु पर्छ । दिनहुँ खाइरहने र मात्रा पनि बढ्दै जाने अवस्थामा हामीलाई नकरात्मक असर हुन्छ ।
रक्सी सेवनले के बेफाइदा हुन्छन् त ?
रक्सीले सबैभन्दा पहिले मस्तिष्क र पेटमा नकरात्मक असर गर्छ ।
पेटमा हुने समस्याहरु: Gastritis को समस्याहरु जस्तै पेट दुख्ने, फुल्ने, पोल्ने, खान मन नलाग्ने, अमिलो पनि घाँटीमासम्म आउने, कालो दिसा आउने, उल्टी आउने, jaundice हुने (Liver problem) हुन सक्दछ ।
मस्तिस्कमा हुने समस्याहरु: (Seizure) छारे रोग/बेहोसी को समस्या हुने, निन्द्रा नपर्ने, डर लाग्ने, हातहरु काप्ने, तलतल लाग्ने, बिर्सने समस्या, आत्मविश्वासमा कमी आउनेलगायतका समस्या हुन्छन् ।
यी बाहेक Blood pressure बढ्ने, हात खुट्टा झमझम गर्ने, Depression, Aggression, Sucidal attempt, Neurological problem हुन सक्छन् ।
के रक्सी सेवन गर्ने व्यक्तिमा मानसिक समस्या हुन सक्छ ?
हजुर हो, रक्सी नखाँदा छट्पट छट्पट हुने, कताबाट किनेर खाने होला भनेर मनमा आइराख्ने, रक्सी नखाएको रात निन्द्रा नपर्ने, डर लाग्ने, ढुकढुक हुने, रिस उठ्ने दिक्क लाग्ने, हातहरु काँपेजस्तो हुन्छ ।
यस्तो अवस्थामा उसलाई मानसिक स्वास्थ्यसँग रक्सीको सम्बन्ध जोडिएको प्रष्ट हुन्छ । यस्तो अवस्थाको व्यक्ति कुलत(Addiction)मा फसेको छ । त्यसैले उपचार बाहेक उक्त व्यक्ति यो समस्याबाट बाहिर निस्किन सक्दैन ।
रक्सीको लतमा लागेको व्यक्तिलाई हामीले बानी बिग्रेर वा नटेरेर हो भन्ने गर्छौँ । त्यो भन्नु गलत हो । त्यस्ता व्यक्ति कुलतमा फसेको हुन् भन्ने कुरा हामीले कहिल्यै ख्याल गर्दैनौँ ।
रक्सी खाने व्यक्तिले रक्सी नखाँदा उसलाई तलतल लाग्ने, डर लाग्ने, निद्रा नपर्नेलगायतका शारीरिक र मानसिक समस्या देखा पर्छन् । त्यसैका कारणले गर्दा उसले चाहेर पनि रक्सी छोड्न सक्दैन । बेलुकी भएपछि आज कहाँ र कसरी खाने भन्ने कुरा पनि व्यक्तिले मनमा खेलाउन थाल्छ ।
रक्सी मस्तिष्कको एक अंगको रुपमा बस्छ । जसले गर्दा रक्सी छाड्ने बित्तिकै यी समस्याहरु देखा पर्छन् । घर परिवारलाई भने हामीलाई यसले टेरेन भन्ने लाग्छ । त्यस्ता व्यक्तिले रक्सी सकभर छाड्न नपाए हुन्थ्यो भन्ने पनि चाहना राख्छन् ।
रक्सीको कुलतबाट कसरी छुटाउने ?
रक्सीको कुलतबाट व्यक्तिलाई मुक्त गर्न अवश्य पनि सकिन्छ । त्यसका लागि विभिन्न उपचार पद्दतीलाई फलो गर्नुपर्छ । रक्सी धेरै खाने बिरामी मध्ये कतिपयलाई अस्पतालमा भर्ना नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।
थोरै समयसम्मको कुलत हो भने औषधिको चक्कीले पनि रक्सी नखाँदा पर्ने समस्या (withdrawl) कम गर्न सकिन्छ । त्यसपछि रक्सी खाँदा आउने समस्या(Depression, Anxiety, Psychosis)को उपचार सुरु गर्नुपर्छ । त्यस्ता व्यक्तिलाई तलतल नलाग्ने, रक्सी खादा उल्टी हुने (Aversion Treatment) उपचार पनि सुरु गर्न सकिन्छ ।
Counceling (individual and family) therapy जसमा व्यक्तिलाई रक्सी छुटाउनको लागि Motivational Enhancement Therapy र परिवारलाई कसरी रक्सी खाने व्यक्तिलाई व्यवहार गर्ने भनेर सिकाउन सकिन्छ । केही व्यक्तिलाई भने रक्सी छोडाउनका लागि सुधारकेन्द्रमा राख्नु पर्छ ।
रक्सी सेवनगर्ने केही व्यक्तिलाई भने Rehabilitation centre मा राखेर उपचार गर्नुपर्ने हुनसक्छ तर सुधारकेन्द्रमा राख्ने तर चिकत्सकको सल्लाह नलिने गरेमा यो व्यक्तिको उपचार अपुरो हुन जान्छ र सुधारकेन्द्रबाट निस्कनासाथ त्यस्ता व्यक्तिले रक्सी सेवन गर्न थाल्छन् ।
कुलत (रक्सी,चुरोट,गाँजा, Tabs, Injection) १ हप्ता या २ हप्ता दबाई खाएर चमत्कारीक हिसाबमा रक्सी छुटाउन गाह्रो हुन्छ तर व्यक्तिको चाहना, चिकित्सकको सल्लाह, र परिवारको साथ मिलाएमा यसलाई सजिलैसँग रक्सी सेवनबाट मुक्त गर्न सकिन्छ ।
हाम्रो घरपरिवारमा, समाजमा यस्ता थुप्रै ब्यक्तिहरु हामी देख्न सक्छौँ र उनीहरुलाई सहिमात्रामा सहयोगको खाँचो हुनसक्छ । रक्सीका बारेमा हामी आफू पनि सचेत हुनुपर्छ र अरुलाई पनि सेवन नगर्ने सल्लाह दिनुपर्छ ।